जीवन शैली Archive - चारदिशा
काठमाण्डौ – ३३ वर्षिय फहिम सलेह । जसको मृत्युले यतिबेला अमेरिकी मिडियामा ठूलो स्थान पाएको छ । उनी ठूला मिडियामा हेड्लाइन बनेका छन् । उनका साथीहरुले फहिमलाई ‘बदलिदो विश्वको इलन मस्क’ का रुपमा संज्ञा दिएका थिए । न्युयोर्कमा बंगलादेसी राइड सेयरिङ एप पठाओका सह–संस्थापक तथा प्रविधी उद्यमी फहिम गत...
काठमाण्डौं – विश्वभरी नै सर्वाधिक लोकप्रिय सामाजिक सञ्जाल फेसबुकले भिडियो कलसम्बन्धी नयाँ सेवा शुरु गर्न लागेको छ । अहिले भइरहेको भिडियो कलसम्बन्धी सेवाभन्दा केही थप र फरक विषेशतासहितको सेवा फेसबुकले शुरु गर्न लागेको हो । ‘म्यासेन्जर रुम’ नाम दिइएको सो नयाँ सेवामा एकैपटकमा ५० भन्दा बढीले कुराकानी गर्न मिल्ने...
काठमाण्डौं – जाडो महिनामा तातो–तातो कफी पिउनुको मज्जै बेग्ला हुन्छ। अझ कतिपय व्यक्तिहरु त कफीको सौखिन नै हुन्छन् । विशेष गरी युवाहरुमा यसको क्रेज बढी देखिन्छ। एउटा हातले चुरोट च्यापेर हातमा कफीको चुस्की लगाउनुको मज्जै छुट्टै हुन्छ। तर कफी धेरै मान पर्छ भन्दैमा धेरै कफी पिउन नहुने विज्ञहरुले बताएका...
एजेन्सी – योगले मस्तिष्कलाई फाइदा पुऱ्याउने पछिल्लो एक अध्ययनले पुनः पुष्टि गरेको छ । मस्तिष्कको विकास र कार्यक्षमता वृद्धिमा योगाले सहयोग पुऱ्याउने देखिएको एक वैज्ञानिक अध्ययनको निष्कर्ष छ । ‘ब्रेन प्लाष्टिसिटी’ नामक जर्नलमा प्रकाशित उक्त अध्ययन प्रतिवेदनमा ११ प्रतिवेदन समावेश गरिएको छ । अध्ययनमा योग र मस्तिष्क स्वास्थ्यको अन्तरसम्बन्धलाई...
एजेन्सी – काम गरिरहेको बेला कुर्सीमा बस्दा अधिकांश मानिसहरूको खुट्टा हल्लाउने बानी हुन्छ । कसैलाई याद नै नहुदा पनि खुट्टा हल्लाई रहेका हुन्छन् । यसरि खुट्टा हल्लाउने बानीलाई नराम्रो ब्यहबारको रुपमा पनि लिने गरिन्छ । यसो गर्दा मज्जा आइरहेको महसुस हुन्छ र बिस्तारै यो बानीमा परिणत भइ जहाँ बस्दा...
१७ वर्षको उमेरमै पोर्न स्टार, सामाजिक सञ्जालमा भाइरल
एजेन्सी – एड्रियाना मोरिस पेशाले पोर्न स्टार हुन् । तर उनको सुन्दरता पोर्न क्षेत्रमा भन्दा बाहिरी दुनियाँमा बढी हुन्छ । सबैभन्दा कम १७ वर्षकै उमेरमा पोर्न स्टार बनेकी मोरिस सामाजिक सञ्जालमा पनि उत्तिकै चर्चित छिन् । दुई वर्षमै पोर्न क्षेत्रमा आफुलाई स्थापित गराउन सफल मोरिस सामाजिक सञ्जालमा सक्रियसँगै चर्चामा...
एसीमा बस्दै हुनुहुन्छ ? सावधान !
एजेन्सी – कतिपय मान्छे एसीवाला कोठा भनेपछि हुरुक्कै हुन्छन् । यो गर्मीको मौसममा त अझ एसीको महत्व धेरै हुन्छ । त्यसैले निर्धक्क एसी चलाएर आराम गर्ने धेरैको बानी हुन्छ । तर तपाइलाई थाहा छ । एसीले पनि हाम्रो स्वास्थ्यमा नराम्ररी असर गर्छ। लामो समय एसीमा बस्दा विभिन्न स्वास्थ्य समस्याहरु...
मानिसको उमेर बढ्दै जाँदा स्मरण शक्ति बिस्तारै कमजोर बन्दै जान्छ । विकासक्रमको अनुसार व्यक्तिको उमेर ढल्दै जाँदा खासगरी वृद्ध अवस्थामा स्मरण शक्तिमा ह्रास हुनु स्वाभाविक हो । मानिसको सम्पूर्ण ज्ञान, सीप, विचार, आचरण, हरेक कार्य, व्यक्तिगत पहिचान तथा व्यक्तित्व आदि सबै कुरा स्मरण शक्तिमा निर्भर रहन्छ । स्मरण शक्तिविना मानिसको सम्पूर्ण अनुभव...
एजेन्सी – विभिन्न अनुसन्धानहरुका अनुसार महिलाको मस्तिष्क पुरुषहरुको तुलनामा एकदम तीब्र गतिमा चल्ने गर्छ । महिलाहरुको उमेर भएको पुरुषको मस्तिष्कको तुलना गर्ने हो भने महिलाको मस्तिष्क उमेर पुरुषको भन्दा तीन वर्ष कम हुने पाइएको छ । ‘प्रोसेडिङस अफ नेसनल एकेडमी अफ साइन्सेज’ मा उल्लेख गरिएअनुसार महिलाको मस्तिष्क पुरुषको तुलनामा लामो समयसम्म...
एजेन्सी – चिया प्रायः ले हरेक मौसममा पिउने पेयमा पर्छ । चियालाई दैनिक जीवनशैलीको संस्कृति भन्दा पनि हुन्छ । चिया अधिक पियो भने स्वास्थ्यमा असर पनि गर्न सक्छ । तर यसलाई मिलाएर पिएमा स्वास्थ्यलाई राम्रो गर्ने विभिन्न अनुसन्धानहरुले पुष्टि गरेका छन् । मदर नेचर नेटवर्कले चिया पिउँदा स्वास्थ्यमा हुने...